‘मेरी माया जुन भन्दा उजेली’ - Baikalpikkhabar
‘मेरी माया जुन भन्दा उजेली’
काठमाडौं / गायक नरेन्द्र मल्लको आवाजमा ‘मेरी माया जुन भन्दा उजेली’ बोलको तीज गीत सार्वजनिक भएको छ।
गीत गायक मल्लले आफ्नै युट्युब च्यानलबाट गीत सार्वजनिक गरेका हुन्। गीतमा नरेन्द्रसँगै राखी मल्लले स्वर रहेको छ।
नरेन्द्रको शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा चक्र बम अनु पराजुली र पिलिजा नानुको डान्स रहेको छ ।
गीतको भिडियोलाई विक्रम चौहानले निर्देशन गरेका छन् ।
मङ्गलबार, ०५ साउन, २०७८, बिहानको ०७:५९ बजे
‘बन्छ तिम्रै नाम’ सार्वजनिक
प्रतिभासाली नव गायक तथा गायिका द्वय बुद्ध घ्लान र मुना वाईवाले आफ्नो सांगीतिक जिवनकै पहिलो यूगल गीत “बन्छ तिम्रै नाम“ सार्वजनिक गरेर नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको यात्राको शुभारम्भ गरेका छन् । यस गीतमा प्रसिद्ध गीतकार डि.पी खनालले लेखेका शब्दहरुलाई चर्चित
निरन्तरको लामो बसाइले लोग्ने र स्वास्नीका यौन रोमाञ्चकतामा ह्रास आउनु स्वाभाविकै हो। तर लोग्नेले स्वास्नी छाडेर साली ताकेजस्तै यौन रोमाञ्चकताका लागि स्वास्नीले पनि देवर ताक्न थालिन् भने यो शान्त र सुन्दर कुवामा कस्तो तरंग आउला? त्यसरी सोच्न मिल्ला ? ===============================
‘सक्किगोनी’मा सन्जीता र कविराज थपिए
२०७८ असार २५ / निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै लोकप्रिय हास्य टेलिसिरियल ‘सक्किगोनि’को प्रशारण नियमित हुन थालेको छ । निषेधाज्ञापछि नयाँ कथामा टेलिसिरियलको नयाँ भाग प्रशारण सुरु गरिएको छ । नयाँ भागमा केही कलाकार थपिएका छन् । बिहीबार प्रशारित भएको भागमा दुई
‘एकैसाथ यो झरीमा’
नेपाली तारा सिजन ३ बाट चर्चामा आएका गायक बिनोद राई र द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन २ बाट चर्चामा आएकी गायिका ससिका राईको नयाँ गीत रिलिज भएको छ । सो गीतमा इन्दु तामाङको शब्द रहेको छ भने नेपाली तारा सिजन
लकडाउनको असर फिल्मी क्षेत्रमा पनि, २८ वटा सिनेमा हल नखुल्ने गरि बन्द
दमक,असार २३/ लकडाउनको असर फिल्मी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । १६ महिनादेखि जारी कोरोना संक्रमण महामारीका कारण एकपछि अर्को गर्दै सिनेमा हल बन्द हुन थालेका छन् । यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाका नौ र उपत्यकाबाहिरका १९ गरेर २८ वटा सिनेमा हल
के छ विद्या बालनमा ?
अक्सर सिनेमामा हिरोइनको भूमिका यसकारण थपना गरिन्छ, जसले हिरोको चरित्रलाई सशक्त बनाउन सकियोस् । पुरुषको ‘हिरोइज्म’मा टेको लगाउन हिरोइन खडा गरिन्छ । हिरोइनलाई ग्ल्यामर छविमा पेस गरिन्छ, मानौं उनीहरु जतनसाथ राखिएका सजावटका सामग्री हुन् । उनीहरुलाई पहिर्‍याइदिने पहिरन, मेकअप र
प्रतिभासाली नव गायक तथा गायिका द्वय बुद्ध...
निरन्तरको लामो बसाइले लोग्ने र स्वास्नीका यौन रोमाञ्चकतामा...
काठमाडौं / गायक नरेन्द्र मल्लको आवाजमा ‘मेरी माया...
२०७८ असार २५ / निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै लोकप्रिय...
नेपाली तारा सिजन ३ बाट चर्चामा आएका गायक...